tag: ux |2၏စာမျက်နှာ2| Martech Zone
ငါဒီနေ့တကယ်ကိုအေးမြတဲ့ open source ပရောဂျက်ကို slides လို့ခေါ်တယ်။ Platform ကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဆလိုက်ရှိုးအတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာ HTML နဲ့ CSS စာမျက်နှာတွေကိုအတူတကွချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။ သူတို့သည်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည် (touch screen နှင့် full screen ကိုထောက်ပံ့သည်) ။ ပြီးတော့ဆလိုက်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာသိမ်းထားပေမယ့်လည်းအော့ဖ်လိုင်းမှာပြသနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည် Dropbox နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင်လုပ်သကဲ့သို့မျှဝေနိုင်သည်။ ဒါကကောင်းမွန်ပြီးတိကျသောဆလိုက်ဖြစ်သည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 16, 2010 Douglas Karr
Derek McClain ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည် - အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြုလုပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကသင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အီးမေးလ်လိပ်စာရှိသင့်သလောသို့မဟုတ်သင်၏စာမျက်နှာကို“ ကြိုက်နှစ်သက်” သည့် Facebook ဝါသနာရှင်နှင့်တူသူရှိလိုပါသလား။ မဖြေခင်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ မေးခွန်းကြီးတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်“ or” ၏ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ multi-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းသည်သင်၏စျေးကွက်တစ်လျှောက်လုံးယေဘူယျတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ Facebook ဟာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့တူတယ်
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 3, 2009 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2015 Douglas Karr
ငါလူစုလူဝေးကိုအသုံးချဖို့ရာထူးတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမုန်တိုင်းထန်တယ်။ ဒီဇိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှသူများသည်ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီများကိုငှားရမ်းရန်အားပေးစဉ်လူစုလူဝေးများနှင့်လူကြိုက်များသော 99S ဒီဇိုင်းကဲ့သို့သော spec စနစ်များကိုတန်ဖိုးထားရန်အနည်းငယ်ဟန်ဆောင်သော်လည်းအလွန်လေးစားသောသူများ ငါကတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမယုံကြည်ကြဘူး, ငါနှစ် ဦး စလုံးတန်ဖိုးထားတယ်! ငါ No ၏စုံတွဲတစ်တွဲစိန်ခေါ်! အချို့သောထောက်ခံသူများသည်အကြံဥာဏ်များရယူရန်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမည်သို့ကောင်းမွန်လာသနည်း
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေပါသလား။ ထိုရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းအရေးကြီးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲ application ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သင်မ ၀ င်ခင်အရည်အသွေး၏နောက်ဆုံးအနုပညာသည်သင်မဟုတ်ဘဲသင်၏အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်မည်သည့်အဖိုးတန်သောပရိုဂရမ်ဒေါ်လာကိုမဆိုအသုံးမပြုမီသူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုပိုမိုနားလည်ရန်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။